Apple Store ကဝနျထမျးတှအေသုံးပွုမယျ့ Greeting Card ကိုမိမိရဲ့ကိုယျပိုငျ Memoji နဲ့ဖနျတီးနညျး |
- August 1, 2020 - Pyae Heinn Kyaw
July 31 ရကျနတေု့နျးက Apple ဟာသူ့ရဲ့ ဒုတိယအကွီးဆုံး Retail Store ကို ထိုငျးနိုငျငံမှာဖှငျ့လှဈသှားခဲ့ပါတယျ .. အဲ့ထိုငျးနိုငျငံမှာဖှငျ့လှဈတဲ့ Apple Store မှာ ဝနျထမျးတှဟော သူတို့ရဲ့မကျြနှာနဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ Memoji နဲ့ Name ကိုတှဲပွီး ထုတျထားတဲ့ Greeting Card ကိုပါ လညျပငျးမှာခြိတျဆှဲပွီး Visitor တှကေိုဧညျ့ခံမှာပါ
နောကျပိုငျးကရြငျ ကမ်ဘာအနှံ့က Apple Store အသီးသီးမှာ ဒီ Greeting Card လေးကို အသုံးပွုသှားမယျလို့သိရပါတယျ
ဒီနမှေ့ာတော့ အဆိုပါ Apple Store Employee တှအေသုံးပွုတဲ့ Memoji Card လေးကို မိမိတို့ရဲ့ Memoji နဲ့ကိုယျတိုငျဖနျတီးလို့ရမယျ့ နညျးလမျးလေးကိုမြှဝပေေးသှားမှာဖွဈပါတယျ
Step 1 – iOS 13 နဲ့အထကျရှိရပါမယျ .. Settings > Shortcuts > Allow Untrusted Shortcuts ကို On ထားပေးပါ .. ဒါမှ Shortcut အသဈတှသှေငျးလို့ရပါမယျ .. On လို့မရရငျ Shortcuts App ထဲမှာ မိမိကိုယျတိုငျ Shortcut တခုဖနျတီးပွီး အဲ့ Shortcut ကို အရငျ Run ပေးလိုကျပါ .. ဒါဆိုဖှငျ့လို့ရသှားပါလိမျ့မယျ
Step2– အောကျမှာပေးထားတဲ့ Link ကို Safari ကနဖှေငျ့လိုကျရငျ Shortcuts App ထဲအလိုလိုရောကျသှားပါလိမျ့မယျ .. အဲ့ကရြငျ အောကျဆုံးထိဆှဲခပြွီး Add Untrusted Shortcut ကိုနှိပျပါ
Link – https://www.icloud.com/shortcuts/43224c9a43f94646a9fa033bbf2f6852
Step3– Note ထဲသှားပွီး ကိုယျလုပျခငျြ Memoji ပုံလေးရှေးလိုကျပါ .. မှတျခကျြ – Memoji ဟာ iOS 13 တငျထားရငျ iOS Emoji Keyboard မှာ အလိုအလြောကျပါလာပါတယျ
Step4– Memoji ပုံလေးကို 3D Touch နဲ့ဖိပွီး Share ကိုနှိပျပါ
Step5– ပုံထဲမှာပွထားသလို Apple Store Memoji Badge ကိုရှာပွီးနှိပျလိုကျပါ
Step6– ဒီလိုပျေါလာရငျ ကိုယျ့နာမညျရေးပေးလိုကျပါ (အရမျးရှညျရငျ Card နဲ့မဆနျ့တော့တာ သတိပွုပါ)
Step7– အရောငျရှေးပါ
Step 8 – Save Image ကိုနှိပျပါ
Step9– သငျ့ကိုယျပိုငျ Memoji နဲ့ Apple Store ကဝနျထမျးတှလေို Greeting Card လေးရပါပွီ
PS .. Shortcut App ထဲကနေ Apple Store Memoji Badge Shortcut ကိုတိုကျရိုကျသှား Run လို့လဲရပါတယျ .. အဲ့ကရြငျ ​Photos ထဲမှာ Save ထားတဲ့ ကွိုကျနှဈသကျရာပုံနဲ့ ဖနျတီးလို့ရသှားမှာပါ
July 31 ရက်နေ့တုန်းက Apple ဟာသူ့ရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံး Retail Store ကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်သွားခဲ့ပါတယ် .. အဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်တဲ့ Apple Store မှာ ဝန်ထမ်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Memoji နဲ့ Name ကိုတွဲပြီး ထုတ်ထားတဲ့ Greeting Card ကိုပါ လည်ပင်းမှာချိတ်ဆွဲပြီး Visitor တွေကိုဧည့်ခံမှာပါ
နောက်ပိုင်းကျရင် ကမ္ဘာအနှံ့က Apple Store အသီးသီးမှာ ဒီ Greeting Card လေးကို အသုံးပြုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
ဒီနေ့မှာတော့ အဆိုပါ Apple Store Employee တွေအသုံးပြုတဲ့ Memoji Card လေးကို မိမိတို့ရဲ့ Memoji နဲ့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရမယ့် နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
Step 1 – iOS 13 နဲ့အထက်ရှိရပါမယ် .. Settings > Shortcuts > Allow Untrusted Shortcuts ကို On ထားပေးပါ .. ဒါမှ Shortcut အသစ်တွေသွင်းလို့ရပါမယ် .. On လို့မရရင် Shortcuts App ထဲမှာ မိမိကိုယ်တိုင် Shortcut တခုဖန်တီးပြီး အဲ့ Shortcut ကို အရင် Run ပေးလိုက်ပါ .. ဒါဆိုဖွင့်လို့ရသွားပါလိမ့်မယ်
Step2– အောက်မှာပေးထားတဲ့ Link ကို Safari ကနေဖွင့်လိုက်ရင် Shortcuts App ထဲအလိုလိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ် .. အဲ့ကျရင် အောက်ဆုံးထိဆွဲချပြီး Add Untrusted Shortcut ကိုနှိပ်ပါ
Step3– Note ထဲသွားပြီး ကိုယ်လုပ်ချင် Memoji ပုံလေးရွေးလိုက်ပါ .. မှတ်ချက် – Memoji ဟာ iOS 13 တင်ထားရင် iOS Emoji Keyboard မှာ အလိုအလျောက်ပါလာပါတယ်
Step4– Memoji ပုံလေးကို 3D Touch နဲ့ဖိပြီး Share ကိုနှိပ်ပါ
Step5– ပုံထဲမှာပြထားသလို Apple Store Memoji Badge ကိုရှာပြီးနှိပ်လိုက်ပါ
Step6– ဒီလိုပေါ်လာရင် ကိုယ့်နာမည်ရေးပေးလိုက်ပါ (အရမ်းရှည်ရင် Card နဲ့မဆန့်တော့တာ သတိပြုပါ)
Step7– အရောင်ရွေးပါ
Step 8 – Save Image ကိုနှိပ်ပါ
Step9– သင့်ကိုယ်ပိုင် Memoji နဲ့ Apple Store ကဝန်ထမ်းတွေလို Greeting Card လေးရပါပြီ
PS .. Shortcut App ထဲကနေ Apple Store Memoji Badge Shortcut ကိုတိုက်ရိုက်သွား Run လို့လဲရပါတယ် .. အဲ့ကျရင် ​Photos ထဲမှာ Save ထားတဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာပုံနဲ့ ဖန်တီးလို့ရသွားမှာပါ